LAGU DUUBAY BAKAYLAHA GACMAHOODA: SAWIRADA, QIYAASTA, QAABABKA NAQSHADEYNTA - XOOLAHA
Daadinta bakaylaha, sida loo sameeyo daadin u ah bakayle leh gacmahaaga
Nafaqeynta iyo dayactirka ee bakaylaha waa shaqo xiiso leh oo fudud. Haddii aad leedahay qorshe, ganacsigan faa'iidada leh ayaa si fudud kuu heli kara.
Akhri buug faahfaahsan, waxaadna baran doontaa sida si habboon loo sameeyo iyo qalabka loo yaqaan 'bakayle'.
Faa'iidooyinka bakaylaha taranta ee cawska
Khamriga waxaa lagu hayn karaa baqash furan oo keliya waddamada leh xaalado jawi fudud oo fudud. Xerooyinka furan iyo hawada cusub, xayawaanku waxay dareemaan raaxo. Si kastaba ha ahaatee, waddamada leh qaboobaha qaboobaha iyo isbeddel deg deg ah heerkulka, bakaylaha waa in lagu hayaa gudaha. Si loo dhammeeyo, waxay caado u tahay in la dhiso kombiyuutarada oo idil - kuwa loo yaqaan "Sheds".
Daarad waa qaab dhisme ah oo ka kooban qolof iyo dhowr saf oo unugyo qalabaysan oo la adeegsado gacanta ama nidaamyada automated.
Faa'iidooyinka ugu muhiimsan ee bakaylaha:
kor u qaadaan waxsoosaarka beeraha iyada oo loo marayo maareynta habsami u socodka
isticmaalka ugu fiican ee dhulka;
fursada ah in la dhiso mini-krolefermu gacmeed leh, iyadoo la isticmaalayo qalab dhisme kharash yar;
suurtogalnimada haysashada bakaylaha ee baqshiinka kala duwan;
xaalado raaxo leh oo loogu talagalay taranta taranta (heerkulka ugu fiican, ilaalinta qorraxda iyo dabaysha).
Ma taqaanaa? Khamriga waxaa iska leh qoyska Zaitsev. Sida la ogyahay, dhibaatooyin ujeeda cidlo. Iyo bakaylaha, on lid ku ah, waa xayawaanka bulshada, duurka ay ku nool yihiin kooxo. Tani waa farqiga ugu weyn ee laga helo hares.
Sida loo sameeyo daaqada bakaylaha leh gacmahaaga
Guryaha yaryar (xajmiga) ee bakaylaha waa la iibsan karaa, laakiin sidoo kale waxaad dhisi kartaa gacmahaaga, ka dib sawir muuqaal ah. Habka loo ilaaliyo bakaylaha ee caleemaha ayaa noqda mid caan ah, si tartiib tartiib ah u beddelaya baqashii hore. Dhismaha dhismaha uma baahna inaad samayso maalgelin khaas ah oo ku haboon xataa bilawga ganacsigan.
Waxa aad u baahan tahay si aad u sameysid shukumaan, alaab qaadasho
Marka hore waxaad u baahan tahay inaad go'aan ka gaartid waxyaabaha aan ka dhisi doono guryaha mustaqbalka ee bakaylaha. Meelaha caadiga ah waa bir ama miraayad alwaax ah iyo unugyada mesh ee birta ah ee ku yaala dusha sare (xuddunta). Qayb muhiim ah oo ka mid ah qaabdhismeedka dusha sare waa qaab beeg leh. Dhismaha waxaa laga dhisi karaa qoryo ama bir ah. Unugyada waxaa la dhigaa laba ama saddex saf oo labada dhinac ee dhismaha.
Waa muhiim! Maaddaama birtu ay ku iftiiminayso qorraxda, waa wax aan loo baahnayn in ay isticmaasho qalabkaan dhismaha ciriiriga. Meelaha birta leh ayaa xayawaanku dareemayaan raaxo la'aan. Beddel aad u wanaagsan oo loogu talagalay baqashada birta waxay noqon kartaa mid loogu talagalay bakayle laga sameeyey polycarbonate daahirsan.
Si aad u abuurto cayayaanka waxaad u baahan doontaa qalabka dhismaha ee soo socda:
qalabka caadiga ah ee qoryaha iyo birta;
nalka iyo ciddiyaha;
Waxa kale oo aad u baahan tahay inaad horay u diyaariso mesh, mootooyinka, baararka, walxaha iyo qalabka saqafka. Markaad dhiseysid kabaha bakaylaha leh gacmahaaga, hubi inaad isticmaasho sawiro diyaar ah.
Tilmaamaha talaabo-tallaabo ah ee ku saabsan abuurista dusha gacmahaaga (sawirada, cabbirrada)
Cayayaanka ayaa ku yimid qiyaaso kala duwan. Xayawaanka yaryar, qiyaasta unugyada waa caadi ahaan 60 cm dhererka iyo 50 cm ee dhererka. Wixii bakaylaha bislaado, dhererka waa inuu ahaadaa ugu yaraan 1 m. Dumarka, qafisku waa in loo qaybiyaa laba qaybood, kuwaas oo ku xiran god. Qaybta yar ee ka mid ah noocyada bakaylaha.
Tilmaamaha caadiga ah ee loogu talagalay ee bakaylaha ayaa lagu soo bandhigay sawirka. Dhammaan cabbiradu waxay ku jiraan cabbirka buuxa.
Waa muhiim! Habka unugyada waa in laga helaa laba dhinac. Qeybta ugu hooseysa ee unugyada waa in lagu dhajiyaa dhererka ugu yaraan 60 cm dhulka, taasina waxay sabab u tahay xaqiiqda ah in bakaylaha aysan u dulqaadan karin jawi qoyan.
Tilmaamaha talaabada tallaabo ee loogu talagalay dhismaha bakayle ah:
Marka hore waxaad u baahan tahay dhis dhisaha alwaax ama biraha. Sida kor ku xusan, waxaan kugula talineynaa inaad sameysid dabka kaabayaasha laga sameeyay polycarbonate. Dhaqanku waa inuu noqdaa mid xoog leh oo degan, leh xaglo toosan oo cad. Si looga fogaado khaladaadka, waxaa lagugula talinayaa inaad si joogto ah u hubiso heerka shaqadooda.
Kadibna labada dhinac ee shaxda ayaa socda sal u ah unugyada mustaqbalka. Isticmaalida baararka qoryaha ah, waxaan u qeybin karnaa dhererka guud ee shaxanka ilaa laba ama saddex heer. Heerka qafis kasta waa ugu yaraan 50 cm Ciraaqka daadinta ee bakaylaha waa in laga ilaaliyaa qoyaanka, sidaa daraadeed heerka hoose waa in uu ahaado dherer 60 cm dhulka ama dhulka. Inta u dhaxaysa safafka unugyada daadsan waa inay ahaadaan meel yar oo ay ku xiran tahay biraha gaasku. Gawsers waxaa loogu talagalay in laga saaro saxarada xayawaanka.
Kaddib, sii wad dhismaha salka (hoose) ee daaqada. Qaybta hoose ee baqashada digaaga ee bakayleedka waxaa laga sameeyay xayawaan alwaax ah. Reiki waxaa loo qaybiyaa fogaan ah 1.5 cm midba midka kale waxaana loo taagaa qaabka ciddiyaha.
Tallaabada xigta waa jarida meshka birta qadar gooni ah oo ah cabbir gaar ah. Iyadoo caawimaadyada shabakadaha ku xidhan dhabarka, hal dhinac iyo dhisida albaabka. Shabaqa waa in la kariyaa oo keliya ka baxsan geedaha si ay bakaylaha u waxyeeleeyaan mesh biraha.
Waayo wax soo saarka albaabka Laga soo bilaabo laths waxaa lagama maarmaan ah in la diyaariyo saldhig ayadoo la eegayo cabbirka lagu muujiyay sawirada. Iyadoo caawimaadyada looxyo ku jira qaabka salka ah ee cufan iyo mesh ku lifaaqan. Albaabka waa inuu xiraa si adag. Sidoo kale albaabka waxaad u baahan tahay inaad xirtid furaha.
Shed dusha sare ee daboolay ama waxyaabo kale oo santuukh ah (ikhtiyaar). Si looga baxo roobabka, saqafku waa in la dhisaa xagal yar.
Bawlos daadiyeen suurad wacan si loo hubiyo.
Isku-diyaarsi loogu talagalay bakaylaha
Goobta bakaylaha waa inay ahaato mid sahlan. Qiyaasta unugyada iyo xayiraaduhu waa inay u oggolaadaan shaqaaluhu in uu gaaro gees kasta oo ka mid ah xero. Qaybinta quudinta iyo biyaha, nadiifinta, farsamaynta iyo hubinta - dhammaantood waa inay noqdaan kuwo joogto ah oo la fuliyaa iyadoo loo eegayo jadwal gaar ah.
Qoryaha daaqadaha waxaa loo yaqaan 'bakeeriga' waxayna mar kale noqotaa dhul beereedka jermiska, jiirka iyo cayayaanka. Waxaa lagugula talinayaa in la daboolo dabaqa laf-dhabarka oo ku siidaayo yar yar. Sidaas awgeed way fududahay in la nadiifiyo lana nadiifiyo cayayaanka ee bakaylaha. Qeyb kasta waa ineey joogtaa: cabitaanka khamriga, fasaxyada shabakada qaxwada, taarikada qashinka miraha, mashiinka cawska.
Marka la diyaariyo daadinta waa muhiim inaad bixiso iftiin fiican. Wakhtiga diiran, waxaa lagama maarmaan ah in la keeno bakaylaha leh hawo cusub iyo iftiin joogto ah. Doorasho weyn waa inaad daaqadaha saqafka saartaa saqafka iyo derbiyada.
Maaraynta dayactirka ee bakaylaha waxay muujinaysaa hawo wanaagsan oo qolka; laakiin ha samayn samaynta - bakaylaha ma istaagi karo dabaysha.
Heerkulka hoose, dhismaha dusha sare leh waa in lagu daboolaa dhammaan qalabka dhismaha ee loo yaqaan 'insulating materials' (tusaale ahaan, caag badan, caws engegan). Haddii ay jiraan cayayaanka beerta, xilliga qaboobaha bakaylaha waxaa loo wareejin karaa dhismaha. Si kastaba ha noqotee, waxaa fiican inaad haysatid muraayado dheeraad ah oo loogu talagalay sababa gudaha dibedda. Waxa kale oo aad ku dhejin kartaa dhismaha oo dhan dhismaha derbiyada gaashaameedka, sidaas awgeed, waxaad heli kartaa qol daboolan. Si kastaba ha noqotee, gobollada leh cimilo qabow aad u qabow, bakaylaha waxaa lagu rusheeyaa oo keliya gudaha.
Raaxo diyaarsan ee bakaylaha leh gacmahooda, talooyin iyo khiyaamo
Dhisidda dhismayaasha bakaylaha waxaa loogu talagalay miisaaniyad warshadeed iyo beero yar yar. Isgaadhsiinta caanaha ee bakaylaha ayaa si buuxda u shaqeeya. Nidaamyada xooggan ee nadiifinta, quudinta, iyo biyaha ayaa sameeya habab gaar ah, taas oo si weyn u kordhisa soo saaridda wax soo saarka. Beeralayda yaryar ee beeraha waxaa loo adeegsadaa shaqa-gacmeed (iyo habab badan oo loo fududeyn karo lana hagaajin karo).
Waxaa jira dhowr qawaani ah oo loo baahan yahay in la ilaaliyo si loo xaqiijiyo xaalado raaxo leh oo loogu talagalay dayactirka digaagga ee bakaylaha:
Marnaba maaha in qafisku uu hoos u dhaco, uma baahna wax kaydsan.
Dhamaan ragga waa lagama maarmaan in ay abaabulaan kafateer furan oo leh awood u leh inay guuraan. Tani waxay leedahay saameyn toos ah oo ku saabsan awoodda ragga si loo jaro.
Dhalashada, bakaylaha waxaa loo hayaa meel u dhow haweenka mudo ah. Sidaa daraadeed, 3-4 dhedig waa in lagu meeleeyaa jaangooyooyin gaar ah oo loogu talagalay bakayle leh meel dhexdhexaad ah.
Hal unug oo ka mid ah qaab dhismeedka waa in lagu hayaa meel madhan. Qaar ka mid ah bakaylaha yaryar ma gaari karaan culeyska la doonayo inta lagu jiro xilliga naas-nuujinta. Xaaladdan, xayawaanada ayaa lagu meeleeyaa xero gaar ah waxayna ku quudineysaa dhuunta. Marmarka qaarkood bakteeriyada waxaa lagu quudiyaa dumar kale oo bilaash ah.
Waxay badanaaba dhacdaa in bakayladu ay googo-baxaan iyaga oo leh boogahooda waxayna isku dhaawici karaan naftooda. Sidaa daraadeed, dabaqa mesh ee lagu daadanayo bakaylaha leh gacmaheena waa mid la aqbali karo, laakiin halis ah. Si kastaba ha noqotee, fooriddu waxay leedahay faa'iidooyin badan: hawada iyo nadiifinta. Qaybaha kala duwan ee dabaqa waxaa laga dhigi karaa qaab aad u fiican.
Waxay u muuqataa in ay sameeyaan dabaqyo. Tani waxay sabab u tahay xaqiiqda ah in qaadista unugyada miisaska ama qalabka wax lagu dhejiyo ay sababi karto dhibka keenaya qaab dhismeedka oo dhan.
Waa inaadan albaabka ka dhicin derbiga hore ee yar yar, maaddaama ay taasi adkaan doonto in la daryeesho beerta bakaylaha: way adkaan doontaa in aad xayawaanka ku xirtid gacmahaaga.
Ma taqaanaa? Marka la eego qiyaasta koritaanka iyo dhalmada, xoolaha kale ee beeraleyda ma barbar dhigi karo bakaylaha. Miisaanka labada bakar ee horay usbuuca lixaad dhalashada. Markay tahay da'da 1 bilood, miisaankoodu wuxuu kordhiyaa 10-12 jeer. Intaa waxaa dheer, xayawaankani aad u dhaqso badan. Khamrigu wuxuu gaari karaa qaangaadhnimo marka uu da 'yaryahay 3.5-4 bilood. Dumar kasta wuxuu keenaa qiyaastii 6-14 bakaylaha.
Sida aad arki karto, taranta bakaylaha waa arrin sahlan. Sabirka, dulqaadka iyo daryeelka xayawaanka ayaa kaa caawin doona inaad sameyso natiijooyin fiican. Si loola tacaalo bakayleyda sida ugu guulaha badan, raac talooyinkeena iyo talooyinka.